Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaaryahanadda Ee Maanta Oo - Axadle | Wararka Africa
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ay saaka oo Sabti ah qoreen wargeysyada waaweyn, waxaana xuquuqda wararkan iska leh isla wargeysyada aanu kasoo xiganay oo aanu magacooda war walba ku hor qornay.
Arsenal ayaa ka shaqaynaysa sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd laacibka khadka dhexe ee reer Hungary ee Dominik Szoboszlai oo 23 jir ah, kaas oo qandaraaskiisa RB Salzburg lagu burburin karayo £23 milyan oo Gini. (Mirror)
Tottenham ayaa la filayaa inay samayso saxeex cusub bisha January, waxaanay raadinaysaa difaac dhexe iyadoo la filayo inuu ka tago 24 jirka heerka caalami ee reer Colombia ee Davinson Sanchez. (Football Insider)
Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa wali kalsooni ku qaba in kabtanka kooxdiisa ee Lionel Messi uu sii joogi doono, isagoo iska indho dhego tiray inuu ka hadlo mustaqbalka 33 jirkan oo la filayo inuu ka tago xagaaga soo socda. (Goal)
Jurgen Klopp ayaa ku adkaystay in aanu hubin haddii kooxdiisa Liverpool ay difaacyahanno ka doonan doonto suuqa iibka ciyaartoyda bisha January. (Goal)
Liverpool waxay loo sheegay inay bixin doonaan £26.7 milyan oo Gini haddii ay doonayaan inay la saxeexdaan difaaca Ajax ee Perr Schuurs oo 20 jir ah, kaas oo ay sidoo kale xiisaynayso AC Milan. (Sempre Milan)
Tababaraha Everton ee Carlos Ancelotti ayaa hoos u dhigay wararka sheegaya inuu u dhaqaaqayo saxeexa labada ciyaartoy ee Isco oo Real Madrid dhexda uga ciyaara, ahna 28 jir iyo Sami Khedira oo ah 33 jir kana tirsan Juventus. (Liverpool Echo)
Khadka dhexe ee reer Switzerland ee Granit Xhaka oo 28 jir ah, qorshaha uguma jirto inuu ka tago Arsenal oo uu u wareego Inter Milan bisha January. (Calciomercato)
Xiddiga reer Colombia ee James Rodriguez wuxuu beeniyey warar sheegaya inay qolka lebbiska isku qabsadeen qaar ka mid ah ciyaartoyda xulkiisa. Laacibka dhexda uga ciyaara Everton ayaa lagu warramay inay isku dhaceen Jefferson Lerma oo ah 26 jir u ciyaara Bournemouth iyo Davinson Sanchez oo Tottenham difaaca uga ciyaara. (Star)
Giovanni Reyna oo ah 18 jir u dhashay Maraykanka ayaa heshiis waqti dheer ah oo cusub qalinka ugu duugay Borussia Dortmund, xilli lala xidhiidhinayay Liverpool. (Team Talk)
Aabaha dhalay Erling Haaland ee Alf-Inge oo waqtigii uu dhallinyarada ahaa u ciyaari jiray Nottingham Forest, Leeds iyo Man City ayaa qiray in weerarka reer Norway ee 20 jirka ah ee uu isagu dhalay, ay xiisaynayaan kooxo Premier League ka dhisan, balse uu isagu diiradda saarayo inuu koobab kula guuleysto Borussia Dortmund. (Sport 1)
Trevor Sinclair oo dhexda uga ciyaari jiray Manchester City ayaa rumaysan in Lionel Messi uu iman doono Etihad Stadium kaddib markii uu heshiis cusub saxeexay tababare Pep Guardiola. (Talksport)
Chris Smalling ayaa dhalleecayn ugu jeediyey Manchester United in aanay si fiican ugu caddaynin mustabqlkiisa ka hor intii aanu Roma sannadkii hore, laakiin 30 jirkan difaaca ah ayaa tibaaxay inuu ku faraxsan yahay waqtigiisa Talyaaniga. (Telegraph)
Leeds United waxay dalab £20 milyan oo Gini ah ka gudbinaysaa garabka kooxda Rangers ee Ryan Kent oo 24 jir ah, haddii uu diido inuu la xaajoodo kooxdiisa oo qandaraas cusub u bandhigtay. (Football Insider)
Yaa ka qaybgalay Shirka wada-tashiga Musharixiinta